TRF raadiyaha - Hay'ada Abaal-marinta - Jacaylka, Galmada & Internetka
Bogga ugu weyn TRF ee Raadiyaha
Mary Sharpe ayaa lagu casuumay inay ku biirto Sarah Brett Idaacadda 5 ayaa si toos ah loogala hadlayaa kor u kaca baaxadda leh ee dhawaanahan ku yimid tirada dhallinyarada u baahan daaweynta daaweynta galmada ee NHS-ta. Dooddan markay tahay 7 Oktoobar 2019 waxaan ku baraneynaa dalabka ka yar 19-ka ee loogu talagalay daaweynta kufsiga galmada wuxuu kordhay seddex laab labo sano gudahood. Muddadii u dhaxeysay 2015 illaa 2017 waxaa jiray u soo diritaanka NHS-ta ee NHS oo loogu talagalay dadka dhallinyarada ah ee loo geeyo daweynta galmada. Xilliga soo socda ee 1,400 ilaa 2017 tani waxay ku kortay ilaa 2019. Maqal fikradaha Maryan ee ku saabsan doorka filimada qaawan loo isticmaalo wadista isbeddelkan.
Ra'iisul Wasaaraha ayaa ah warbxin ballaadhan iyo barnaamijka arrimaha hadda socda ee Raadiyaha 4, oo laga soo duubay UK, iyo dhab ahaantii dunida oo idil. Isniintii 1st April 2019 Evan Davis waxay soo bandhigtay qaybta daqiiqada ee 6 saxafiga Chris Vallance oo ku saabsan nidaamka Xaqiijinta Da'da ee Boqortooyada Ingiriiska si loo yareeyo helitaanka carruurta ee sahlan ee sawir-gacmeedka adag ee internetka. Mary Sharpe, oo ah madaxa TRF, ayaa tiri sababta sharcigan uu wali muhiim u yahay, xitaa haddii uusan kaamil ahayn.
BBC Radio Scotland waa shabakadeena gudaha. TRF waxay ku soo baxday bandhigyo dhowr ah, waadna nala raadin kartaa BBC.
Tafaariiqda dharka tooska ah ee Boohoo.com ayaa mid ka mid ah xayeysiisyadeeda ka mamnuucday Heerarka Halbeega Xayeysiinta inay isticmaalaan hal-ku-dhigga "Dir qaawan" si kor loogu qaado dharka midabeysan. Mary Sharpe waxay ku biirtay Jess McBeath iyo faallooyinka kale ee Kaye Adams oo muujinaya 17 Oktoobar 2019 iyagoo eegaya xikmadda xukunka xukunka aragtida ilaalinta carruurta.
Waa maxay saamayntu ku yeelashada galmada dhalinta? Mary Sharpe waxay ka soo muuqatay Isniinta Subax Wanaagsan ee Scotland 3 Sebtember 2019 oo ay weheliso Kufsiga Dhibaatada Scotland. Ka aqri faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan galmada iyo sharciga Scotland halkan.
Iyadoo lagu dhawaaqay taariikhda la soo bandhigayo ee xaqiijinta Da'da Xaqiijinta ee UK, Mary Sharpe waxay ku biirtay telefoon saacad-dheer ah oo la leh Laura Maxwell on 18 April 2019. Qodobada 6-daqiiqada soo socda waxay kufadhiyaan fikradeeda qaybta ugu dambeysa ee barnaamijka.
La hadlida dadka da'da yar ee kufilan waxa ay ahayd mawduuca doodda ay martigelisay Kaye Adams 20-kii Maarso 2019. Mary Sharpe waxaa la soo muuqday Sarah, oo ah mid ka mid ah hooyooyinka ka socda Channel 4 docu-taxane ah "Mums Make Porn", Andrea Chapman oo ah la-taliye iyo u-ololeeyaha u-ololeeyaha ku lug leh Jerry Barnett.
Maqla Mary Sharpe oo ka hadlaysa ogolaansho iyo fara-xurun ahaan qaybta gaaban ee ku taal Stephen Jardine muuji on 15 Febraayo 2019.
John Beattie waxay qabteen dood kulul oo ku saabsan isticmaalka filimada sawirada ee 20 November 2018. Martida waxaa ku jiray Mary Sharpe, Anne Chilton oo ka yimid Xiriirada Scotland iyo Emma Kenny.
Stephen Jardine wareysi la yeelatey Mary Sharpe, oo ay weheliso macalinka iyo hooyada walwal leh ee barnaamijka Isgoyska Radio Scotland ee ku yaala 17 July 2018.
Mary Sharpe waxaa Ian McNally wareysi ka qaaday Radio Napier oo ku yaala 10-daqiiqo daqiiqado ah ee Daroogooyinka Dijital ah. Waxaa lagu daabacay bogga 27 October 2017.
Radio ka baxsan Scotland
Raadiyaha Sputnik ee adeegga aduunka ee Moscow ayaa wareysi la yeeshay Mary Sharpe loogu talagalay daqiiqado 11. Intii lagu guda jiray wareysiga waxay ka wada hadleen kor u kac weyn oo kufsiga kufsiga ee kufsiga ilmaha ee laga soo sheegey England iyo Wales. Waxaa la soo duubay dhagaystayaal caalami ah oo ku yaala 9 Oktoobar 2017.
Mary Sharpe wareysiiyay Stig Abell oo ku yaala 3-daqiiqada daqiiqada ee LBC Radio ee magaalada London, 21 August 2016. Waxay u socotay UK oo dhan.
Mary Sharpe oo ka hadlaysa tababbarinta wacyigelinta porno ee wada hadal ah 18 daqiiqad oo lala yeeshay Stephen Nolan on Radio Ulster ee Northern Ireland.
Riix halkan haddii aad rabto inaad ka maqasho wax badan oo ka mid ah sheekooyinka la xiriira barnaamijyada telefishanka Stephen Nolan.